Nzira yekuwana spam backlinks yakabviswa sei nekukurumidza sezvinobvira?
Mamwe makore apfuura, spam kuisanidza yakashandiswa kuva tsika yakawanda chaizvo muSeO yakashanda zvakanaka. Ndinoreva kuti munguva dzakapfuura kuva nehuwandu hwemasangano kubva kumahara microsite asingabhadhari (seShokoPress, Blogspot, nezvimwewo) anogona kuita kuti zvikwanisike kushanda zvakakwana kwekuvakwa kwechikwata, pamwe chete neSOO yakawanda hurongwa. Ndinoreva kuti kushandisa imwe yeiyo web hostings inowanika mukusununguka, iwe unokwanisa kuisa mawebsite akawanda sezvaunoda - nokuda kwechinangwa chimwe chete. Kubatanidza kumashure ako webhusaiti yepamusoro kana bhulogi yakatsigirwa ne keyword-rich text anchors. Asi iye zvino neine penguin update, zvinhu zvakashandura zvinoshamisa - nyaya ye microsite spam kuunganidza iri kutidana kuti tizive kuti tingabvisa sei backlinks idzi nokukurumidza uye dzakanaka. Zvechokwadi, kune mawebsite akawanda uye mabhuku akawanikwa achiri paWebhu iyo iyo yekare Grey-Hat link building inoita kunge ichiita zvakanaka. Ndinoreva vashandi vema webmasters, mabhuku kana mabhizinesi epamusoro kazhinji vanonoka chiito chekusiya mikana microsite spam - nekuda kwekuti vanoita sevari kubetsera, kunyanya kwenguva.
Asi ini ndichiri kumanikidzira kuti iwe haufaniri kungoziva chete kuti ungawana sei izvi shure uye zvakanaka asi funga kubvisa pawebsite yako kana bhuroki nekukurumidza. Nei chikonzero ichi chiri kudzvinyirira? Kana kufunga kwangu kuri kwakarurama, iyo inouya Penguin update ingangodaro idzidziswe kuti ione hukama hwe spam. Nenzira iyo, tichifunga kuti injini yekutsvaga yeGoogle iri kuita zvakanakisisa kurwisana nezvinhu zvose zvisiri izvo - zvinoreva kuti rimwe zuva ungazviwana uri mumatambudziko makuru. Sezvandatotaura kare, chikwata ichi chekuvaka chivako chinouya zvino kunyatsopesana neMukuru Webmaster Guidelines neGoogle. Ndosaka pasina chikonzero chekutaura kuti kune ngozi inogona kuve yakakosha yekuti iwe uwane rusununguko rwekusimudza. Mumamiriro ezvinhu akaipisisa mamiriro ezvinhu ose anogona kuguma kunyange nekugadziriswa kwebhuku, kazhinji kushanda kune imwe nguva yakaoma uye yakawanda isingakanganwiki.
Pashure pezvose, zvinongova kwauri kuti usarudze-kana kuti uzviongorore uye kubvisa izvi zvingangove zvine ngozi paziso refupi kana kuchengetedza zvinhu sezvazvakanga zvakaita. Chero, pasi apa ndichaenda kune dzimwe nzira dzingaratidza kuti sei kuwana spam backlinks inowanikwa nokukurumidza uye isina kubviswa pakuonekwa.
1. Chokutanga pane zvose, edza kubvisa zvisizvo zvisingaoneki zvisizvo kushandisa Google Webmaster Tools kana chero ipi zvayo inozivikanwa paIndaneti Checker tools like Semalt Analyzer (Semalt), Open Site Explorer (Moz), kana Majestic SEO. Cherechedza, zvisinei, kuti imwe chikamu chezvipikano zve spam zvichange zvisingabviri kusarudzwa, uye saka hazvionekwi.
2. Zvadaro, chengeta Google Analytics Web Traffic uye enda ne "Referrals" chikamu. Kuita izvi, kutengesa dheinhe rakawanda sezvinobvira ndinotarisa urongwa hwekutsvaga uye zvichida iwe uchava nerusununguko kuti uwane chikamu chekusati chawanikwa pasina microsite spam. Cherechedza, zvisinei, izvi hazvirevi kuti zvose zvingave zvakakonzera kutsanangurira, asi vamwe vavo vanofanira kunge vakazviwana.
3. Kuwana zvinhu zvose zvakachena uye zvakajeka, iwe unogona kuitawo mamwe mapepanheet work. Zvose zviri nyore asi zvinotora nguva yakawanda uye simba. Zvose zvaunoda ndezvekuumba mazita makuru emakrositi anozivikanwa, rimwe rondedzero nezvose zvinogona kushandiswa mazwi makuru - kuti uitezve zvose zviri zviviri kune rimwe chete. Pakupedzisira, shandisa zvishandiso zvekutsvaga seScrapebox kuti zvikwekwe nzvimbo dzose dzinoshungurudza kuti uone kana dziripo zvechokwadi-uye tora matanho kana zvikaita Source .